Akụkọ - Esi Wụnye Mpempe akwụkwọ Acryli
Acryli mirror mpempe akwụkwọ na-eme ka a bara uru na ndị mara mma mgbakwunye na mgbidi, ibo ụzọ, entryways na ndị ọzọ, na-agbakwunye a oge a aka ọ bụla ohere ị rụnyere ya. ibu ibu. Enwere ike ịkpụ ya ma mee ya ka ọ dabaa otu ụdị, nke pụtara na ị nwere ike iwunye ọtụtụ mpempe akwụkwọ buru ibu maka mgbidi enyo nkwupụta ma ọ bụ wụnye obere iberibe maka ihe ịchọ mma ịchọ mma kaleidoscopic. Mpempe akwụkwọ enyo na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe karịa iko, nke pụtara na ọ nwere ike ikwekọ n'ụkpụrụ ọ bụla dị ugbu a ị na-etinye ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ohere ọ bụla nke ntụgharị, gaa maka acrylic buru ibu, ebe ọ bụ na ọ naghị agbanwe agbanwe ma nwee ogo ziri ezi dị elu.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịwụnye mpempe akwụkwọ eji achọ ụlọ n’ụlọ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị, soro ndụmọdụ ndị dị n’okpuru iji jide n’aka na nrụnye gị na-aga were were.
Tupu i tinye mpempe akwụkwọ acrylic gị, ịkwesịrị ịkwadebe ebe ọrụ gị:
• Tụọ ohere ị na-etinye na acrylic ka ọ bụrụ nke ziri ezi - ebe nke a bụ ndụmọdụ doro anya, ọ dị mkpa ịme nke a nke ọma ka ihe nrụnye fọdụrụ na-aga nke ọma.
• Wepụ 3mm na mita ọ bụla site na akụkụ - dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na elu dị 2m x 8m, ị ga-ewepu 6mm n'akụkụ 3 mita na 24mm n'akụkụ 8 mita. Onu ogugu bu nha nke acrylic gi kwesiri ibu.
• Debe akwa polyethylene nke mpempe akwụkwọ acrylic na-abịa iji jide n'aka na ọ gaghị emebi ma ọ bụ metọọ ya n'oge usoro ntinye.
• Kanye akara ebe ịchọrọ igwu, bepụ ma ọ bụ hụ mpempe akwụkwọ gị ka ọ bụrụ nha ya. Mee nke a na ihe nkiri nchebe, ọ bụghị mpempe akwụkwọ acrylic.
• Ọ bụrụ na ị belata mpempe akwụkwọ acrylic gị ka ọ dị nha, gbaa mbọ hụ na akụkụ ahụ yiri enyo na ihe nkiri nchebe na-eche gị ihu, yabụ ị ga - ahụ etu o si agagharị n’oge usoro nrụnye
Na-esote, ịkwesịrị ịkwadebe elu nke a ga-etinye akwụkwọ acrylic ahụ. Fọdụ ihe ndị kwesịrị ekwesị iji tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ gị acrylic gụnyere gypsum na-enweghị mmiri, enyo enyo edozi, plasta, okwute ma ọ bụ mgbidi mgbidi, ogwe osisi na ogwe MDF. Iji hụ na ihu gị dị njikere maka echichi, lelee iji hụ na ọ dị larịị, dịkwa mma na enweghị mmiri, griiz, ájá ma ọ bụ kemịkal. Iji jide n'aka na elu gị ahọpụtara nwere ike ịkwado mpempe akwụkwọ acrylic, gbalịa tinye ya na mkpụrụ gị iji hụ ma ọ nwere ike ịkwado ibu ahụ. Mgbe ị gosichara na elu gị nwere ikike iburu ibu achọrọ, ị nwere ike iji obi ike malite nrụnye gị. Soro usoro ndị a iji mezue nrụnye dị mma:
• Wepu ihe nkiri nchedo n'akụkụ akụkụ nke mpempe akwụkwọ ahụ nke ga-eche ihu ihu ma hichaa ya na mmanụ mmanụ ma ọ bụ mmanya isopropyl.
• Họrọ onye na-emekọ ihe, nke nwere ike ịbụ teepu ihu abụọ, acrylic ma ọ bụ silicone adhesives. Ọ bụrụ na ị na-eji teepu, dowe ibe mpe mpekere nke gafere obosara nke mpempe akwụkwọ mirror.
• Jide mpempe akwụkwọ ahụ n'akụkụ 45 Celsius n'akụkụ ebe ị na-achọ idowe ya. Lelee iji hụ na ị nwere obi ụtọ zuru oke na nhazi ahụ, ebe nke a bụ ohere ikpeazụ ị ga-edozi nsogbu ọ bụla tupu itinye mpempe akwụkwọ ahụ na mkpụrụ.
• Wepu akwụkwọ ahụ na teepu ihu abụọ gị ma jide ọnụ elu nke mpempe akwụkwọ ahụ megide elu gị n'otu akụkụ 45 Celsius. Jiri ọkwa mmụọ iji chọpụta na ọ kwụ ọtọ na mgbidi ahụ, wee jiri nwayọ belata akụkụ mpempe akwụkwọ ahụ ka ọ na-agbatị n'ụzọ zuru oke megide mkpụrụ ahụ.
• Pịa mpempe akwụkwọ ahụ nke ọma iji hụ na teepu ahụ na-agbaso kpamkpam - gaa n'ihu na ịpị ọ bụrụhaala na ịchọrọ ijide n'aka na nrapado ahụ emetụtala nke ọma.
• Ozugbo enwetara mpempe akwụkwọ ahụ, wepụ ihe nkiri nchedo si n'akụkụ enyo nke chere gị ihu ugbu a.
Site na ụfọdụ aka handyman nkà, onye ọ bụla nwere ike iwunye pụtara acrylic mirror sheeting n'ụlọ ha, azụmahịa ma ọ bụ ego onwunwe. Gbakwunye enyo nkwupụta na ime ụlọ ịwụ gị, ihe ịchọ mma na-egosipụta ime ụlọ ihi ụra gị ma ọ bụ tinye mmetụ nke nchapụta na mpaghara ọ bụla ọzọ nke ụlọ gị site na ịwụnye mpempe akwụkwọ enyo nke gị ekele maka ndụmọdụ dị n'elu!
Etu esi etinye akwukwo enyo acrylic. (2018, Machị 3). Weghachite October 4, 2020, site na worldclassednews:https://www.worldclassednews.com/install-acrylic-mirror-sheet/